आउने माघमा मुसिकोट महोत्सब: १५० स्टल रहने महोत्सबका आकर्षण के के हुन् ? – Gulminews
Home/जिल्ला समाचार/आउने माघमा मुसिकोट महोत्सब: १५० स्टल रहने महोत्सबका आकर्षण के के हुन् ?
आउने माघमा मुसिकोट महोत्सब: १५० स्टल रहने महोत्सबका आकर्षण के के हुन् ?
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७६ कार्तिक ३०, शनिबार १९:०९ मा प्रकाशित
गुल्मी, कार्तिक ३० । मुसिकोटको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापार’ भन्ने मुल नारा सहित प्रथम गुल्मी मुसिकोट महोत्सव आयोजना गर्न तयारी थालिएको हो । आउने माघ १५ देखी २६ गतेसम्म मुसिकोट महोत्सव गरिने गरी आयोजक प्रारम्भिक चरणका कार्यहरु सुरु गरेको छ ।
वाणिज्य संघको कार्यालयमा आज समितिका पदाधिकारी तथा पत्रकार बिच भएको बैठकले महोत्सबका बिषयमा प्रारम्भिक तयारीका कामहरु सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले महोत्सव १२ दिनसम्म सञ्चालन गर्ने, महोत्सव स्थल महेन्द्र आदर्श माद्यामिक विद्यालय पछाडीको जग्गा बनाउने, प्रचार प्रसार भव्य रुपमा गर्ने निर्णय गरेको छ । संघका अध्यक्ष सुदर्शन शाक्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको बैठकमा संघका उपाध्यक्ष मोहनलाल श्रेष्ठ, सचिब गोपीकृष्ण खरेल, सदस्य ज्ञानहरी सापकोटा लगायत समितिका पदाधिकारी, रेडियो पुष्पाञ्जलीका स्टेशन उपप्रमुख अनिश शर्मा गैरे, पत्रकार कौरब खत्री र कमल पौडेलेको उपस्थिती रहेको थियो । भने सञ्चालन सचिब महेश्वर घिमिरेले गरेका थिए ।